Motivation for success :: राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा कस्तो असर पर्ला ? यस्तो छ मनोज ज्ञवालीको तर्क
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा कस्तो असर पर्ला ? यस्तो छ मनोज ज्ञवालीको तर्क
प्रकाशित मिति : आइतबार, कार्तिक २८ २०७८
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेर व्याजदर बढाउन सकिने बताएको छ । जसअनुसार अब सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गरी निर्धारण गर्न सक्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा कस्तो असर पर्ला ? नविल बैंकका महाप्रबन्धन मनोज ज्ञवालीले यसका फाइदा र असरका बारेमा आफ्नो धारण राखेका छन् ।
1. बैकको निक्षेप (Bidding) को आधारमा लिने निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन मासिक गर्न सकिने। यसअघि तिन महिनासम्म यस्तो ब्याज परिवर्तन गर्न पाईदैनथ्यो।
2. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मुद्दति निक्षेप को अधिकतम ब्याजदरको औषत निकालेर सो मा बढिमा 10% बृद्दि गरेर मात्र ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। पहिले आफ्नो बैंक ले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा 10% थप गरि गर्न पाइने ब्यबस्था थियो।
3.ब्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा 0.50% थप गरेर दिन पाउने ब्यबस्था हटाईयो। अब बैकहरुलाई ग्राहक हेरी 0.50% थप ब्याजदर दिन पाउने छैनन्।
4. आफुसंगै रहेको निक्षेप मा पुन बोलकबोल गर्नु परेमा 0.10% सम्म थप गरि निक्षेप संकलन गर्न पाईनेछ।
1.बैकहरु ले आफुखुशी ब्याजदर प्रकाशित गर्न पाउने छैनन्। सबै बैकहरुको संस्थागत निक्षेप को ब्याजदर 9.05% को हाराहारी हुने देखिन्छ भने ब्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर 10.05% हाराहारी हुने देखिन्छ।
2. बोलकबोलको निक्षेप जुन बैंकसंग छ त्यहि त्यहि बैंक मै नवीकरण हुने अबस्थालाई देखिन्छ। यसले गर्दा बैकहरुको निक्षेप तानातान भएर CD नै नाघ्ने अबस्थामा अली सहजता हुनेछ।
3. बैंकहरुले एउटै प्रकारको निक्षेपमा पनि मागेमा 0.50% थप्ने नत्र कम दरमा नै निक्षेप लगिदिने काम बन्द भएको छ।
यसले हालको निक्षेप रु 47.91 खर्ब र कर्जा रु. 45.35 खर्ब सहितको बैकिङको CD ratio 89.95% लाई कुनै सहजता प्रदान गर्ने होइन तत्कालै बैंकिंग को ब्याज दर निर्धारण को guidelines मात्र दिएको देखिन्छ।